Imārāt Diyaaradka - Wikipedia
25 Maarso 1985 (1985-03-25)
25 Oktoobar 1985 (1985-10-25)
Barnamijka Safarrada Joogtada
Ahmed bin Saeed Al Maktoum (Chairman & CEO)
Al-Imārāt (Carabi: طيران الإمارات DMG: Ṭayarān Al-Imārāt) waa shirkad diyaaradeed oo fadhigeedu yahay Dubai, Imaaraadka Carabta. Duulimaadyadu waa shirkad hoos timaada Emirates Group, oo ah shirkad ay leedahay shirkadda Dubai Investment Corporation ee Dubai.  Waa diyaaradda ugu weyn ee Bariga Dhexe,  oo ka shaqeyneysa 3,600 duulimaad toddobaadkii ka yimaada madaarka Dubai ee Caalamiga ah, in ka badan 140 magaalo oo 81 dal ku leh lix qaaradood. Hawlaha gaadiidka waxaa fuliya Emirates SkyCargo.
An appetiser served in Business Class on Emirates.
On-board meal in Economy class
Airbus A380 First Class Private Suite
Boeing 777-300ER Economy Cabin
Emirates Airbus A380 Shower
Emirates Airbus A380 onboard bar
Emirates waa shirkadda afaraad ee adduunka ugu weyn iyada oo ay soo jiidatay dakhligii rakaabka ee duulimaadkii la socday,  kii afaraad ee ugu badnaa rakaabka caalamiga ah ee la geeyay,  iyo tan labaad ee ugu weyn marka la eego tareenka xamuulka tareenka. Laga soo bilaabo Maarso 2016 ilaa Febraayo 2017 Emirates ayaa ahayd duulimaad aan duulimaad lahayn oo aan dheereyn oo ka timid Dubai ilaa Auckland.
Intii lagu jiray bartamihii 1980-yadii, Gulf Air waxay bilaabeen inay adeegyadooda dib u gooyaan Dubai. Sidaas awgeed, Emirates waxaa la dhisay bishii Maarso 1985 iyada oo taageero ka heshay qoyskiisa boqortooyada reer Dubai, iyada oo Pakistan International Airlines ay bixisay laba ka mid ah diyaaradaha diyaaradaha ee ugu horreeya ee ku saabsan dayuuradaha qoyan. Iyada oo $ 10 milyan oo lagu maal-galiyo raasumaalka waxaa loo baahan yahay in ay si madax-bannaan u shaqeyso dawladda. Pakistan International Airlines waxay diyaarisay xarumo tababar ah oo loogu talagalay shaqaalaha duullimaadka ee Emirates. Duulimaadyada ayaa waxaa hoggaaminayay Axmed bin Saeed al Maktoum, oo ah guddoomiyaha shirkadda dayuuradaha. Sanado ka dib markii la aasaasay, duulimaadka ayaa balaariyay labadaba filimkeeda iyo meelaheeda. Bishii Oktoobar 2008, Emirates waxay dhammaan hawlgalladii ka soo qaaday Garoonka Caalamiga ah ee Duulimaadyada Duulimaadyada ee Dubai 3
↑ . Emirates.com. 2015 http://www.emirates.com/english/destinations_offers/destinations/alldestinations.aspx. Soo qaatay 23 May 2015. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Imārāt_Diyaaradka&oldid=182224"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2018, marka ee eheed 14:35.